USTEVIE WONDER: IINGOMA KWISITSHIXO SOPHONONONGO LWEALBHAMU YOBOMI - IINDABA
Iingoma kwiKhiye yoBomi
* Iingoma kwiKhiye yoBomi * yayisisiphelo sexesha eliyimbali lobuchule bukaStevie Wonder. Amabhongo kunye nobubanzi bayo babungazange babonwa ngaphambili, kwaye akazange aphinde asondele kwinqanaba lalo okanye kwimpembelelo yakhe kwakhona.
Ilifa likaStevie Wonder lelona linamandla kumculo wepop, nangona ibali lakhe lihlala linqabile. Ingoma yakhe yokubhala kunye nelizwi lakhe lihambelana nazo zonke izandi ezinxulumene ne-R & B ezimlandelayo, ukusuka kuMichael Jackson ukuya kuR Kelly ukuya eKhan West, kodwa akukho bhayografi iphambili, akukho mbhalo, akukho nto ibonisa ukutshabalalisa ngokupheleleyo kwezona zibalaseleyo. Ukuchaza umculi wee-1970. Kwaye ungenzi mpazamo-yayilixesha lezinto ezibalaseleyo kunye neealbham ezitshatayo, kodwa akukho mntu wayethandwa, ehlonitshwa, kwaye ehlonitshwa njengaye.
Ngokuqinisekileyo, uWonder akazenzelanga nto ukuba axelelwe ibali lakhe. Kudala-dala, amajelo eendaba aqikelela ukuba ilizwe lakhe libaleka kwi Stevie Ixesha, ukuba iishedyuli kunye nemihla emiselweyo azisebenzi kule ngqondi iphakamileyo, nokuba oko kuthetha ukubonakalisa udliwanondlebe okanye ukuhambisa ialbhamu.
Ubeka injongo engqondweni yakho, wandixelela ngo-2005, xa irekhodi Ixesha lokuthanda yakhutshwa emva kokulibaziseka kweminyaka emininzi, kwaye uthi, Kulungile, yile nto ekufuneka le ngoma ibenayo, le projekthi kufuneka ibe nayo, kwaye awuhlali ncam nangaphantsi koko. Ngelizwi lakhe, uWonder akakhange akhuphe icwecwe elitsha ukusukela oko.
Kodwa noStevie Wonder waqonda ukuba kukho iprojekthi yakhe enye efuna ukuba yamkelwe kwaye ixatyiswe ngelixa esakwazi, kwaye ngo-2014 wanyusa ukhenketho ukuze abonise, ngokuzeleyo, i-magnum opus * yakhe yeNgoma kwi-Key of Life, * ejika i-40 kwinyanga ezayo. Ialbham — ii-LPs ezimbini kunye nengoma ezine ezongezelelweyo ze-EP- yayisisiphelo sexesha lobugcisa, ugqabhuko lomculo olugxunyekwe kuphela liqaqobana lamagcisa (embindini wee-'60s uBob Dylan, ekuqaleni kuka-70's Rolling Stones, ' Ngama-80s iNkosana). Amabhongo kunye nobubanzi bayo babungenakuthelekiswa nanto, amandla ayo kunye nesandi sayo zazingaphelelwa lixesha-kwaye xa sele yenziwe, akazange aphinde asondele kwinqanaba layo okanye ifuthe kwakhona.
Ngomnyaka we-1971, ishumi leminyaka kwikhondo esele lidumile, uWonder wabhiyozela usuku lwakhe lokuzalwa lwama-21 ngokuvumela ikhontrakthi yakhe neMotown Record ukuba iphele, ebambelele kwisivumelwano esitsha esamnika inqanaba eliphezulu lobukhosi kunye nolawulo lobuchule ngaphezulu komsebenzi wakhe. Uphendule ngee-albhamu ezimbini ngo-1972, impumelelo Umculo wengqondo yam kunye nomsebenzi wakhe wokuqala wokwenene, Incwadi Yokuthetha . Ukukhutshwa kwakhe okulandelayo, ngo-1973 Ukungaboni kwaye Ukuzaliseka 'Isiphelo sokuqala ngo-1974 (eyalandela ingozi enkulu yemoto eyamshiya ekwi-coma kangangeentsuku ezine) waphumelela ukubuyela umva kwi-albhamu ye-albhamu yonyaka kwiigrama. Ummangaliso akagcinanga nje ukuphinda abuyise i-Top Ten hits kwiminyaka emithathu kwaye ephindaphinde ubuvulandlela kwimida yeetekhnoloji yomculo (wazisa i-Moog synthesizer kunye nesampuli eluntwini), wazibonakalisa njengelizwi eliphambili loqhanqalazo lwentlalo kunye neenkcazo ezinzulu njenge Ukuhlala esixekweni kwaye awenzanga nto.
Kwaye kwafika ukulinda. Ummangaliso, evakalisa ukudideka neMelika emva kweWatergate kunye nemfazwe engapheliyo eVietnam, wayeqale ukuthetha ngokuyeka ishishini lomculo afudukele eGhana ayokusebenza nabantwana abakhubazekileyo. Uye wafika kwinqanaba lokuqala ukwenza izicwangciso zekonsathi yokuvalelisa. Endaweni yoko, ngo-Agasti ka-1975, watyikitya ikhontrakthi entsha neMotown- isivumelwano seminyaka esixhenxe, ialbham ezisixhenxe, isivumelwano seedola ezingama-37 sezigidi, esona sivumelwano sikhulu senziwe ngenkwenkwezi yokurekhoda ukuza kuthi ga ngelo xesha. Nangona bekukho ukumbombozela malunga nokukhululwa kwe-albhamu kamva kulo nyaka, uWonder waqala ngokuthatha ikhefu, emva koko waqhubeka nokongeza iingoma kwisitokhwe awayezifumene, emva koko wagqiba kwelokuba kukho ukuxubana okungaphezulu kunye nemveliso yasemva kwexesha efunekayo.
Iminyaka emibini isenokungabonakali ngathi likhefu elide phakathi kweerekhodi ngoku, kodwa ngelo xesha, yayingaziwa, ngakumbi kweyona nkwenkwezi inkulu kumdlalo. Abasebenzi baseMotown baprinte izikipa ezifundwayo, Sigqibile ukugqiba. Kwaye xa iseti yengoma engamashumi amabini ananye ekugqibeleni yakhutshwa ngoSeptemba 28, 1976, iphulo lokwazisa lafumana amanye amaphepha kwincwadi yemidlalo yonyaka ophelileyo yerekhodi lokuphazamisa irekhodi Imihlathi , eyayichaze ngokutsha ukwenziwa kunye nentsingiselo yebhlokbuster yokwenyani.
Umatshini wokushicilela iMotown wabhabha kunye nawo wonke umntu owayesebenze kwi-albhamu kwi studio yeLong View eMassachusetts ukudlala kuqala kunye nebhetri yodliwanondlebe noWonder, ebonisa wonke umntu iikopi zealbham. Njengoko yayisenza indlela yayo yokurekhoda iivenkile, Iingoma kwiKhiye yoBomi (itshintshiwe kwisihloko esisebenzayo Masibone Ubomi Ngendlela Obuyiyo ) yayikuyo yonke indawo ojonga kuyo. Ndikhumbula ngokucacileyo ukuba yayiyintoni isiganeko esikhulu sokukhutshwa, kwaye ndandineminyaka eyi-10 kuphela ngelo xesha.
Nangona kunjalo le yayiyimeko enqabileyo kakhulu apho kwakungekho ndlela yokuwuchwetheza umculo. Isandi satsala ngokungakhathali kwi-funk, pop, jazz, izitayile zesiLatin. Iitraki ezisusela kumjelo we-fusion we-Contusion ukuya kwilizwi elibuthathaka lelizwi-kunye nehadi Ukuba Ngumlingo.
Nangona iimvumi ezingaphezu kwe-130 zidweliswe kwikhredithi (kubandakanya iinkwenkwezi ezinje ngoHerbie Hancock, uGeorge Benson, noMinnie Riperton), Iingoma kwiKhiye yoBomi akaze aphambuke kwisinye, umbono ovuthayo womculi omnye. I-pre-chorus e-sneaky in Knocks Me Off My Feet, i-transcendent, spiraling rising of As-hooks pile on top of hooks, tucked irresistingly and unerringly in break, fill, and intros, ngokucacileyo kwi-albhamu enkulu enkulu, i-nostalgic , Swaggering I Wish and the shout-out to Wonder's jazz forefathers (noomama) Sir Duke, kungekudala ukuba bathathe indawo yokuhlala isigxina kwingqokelela yeqela ngalinye elihambayo elizweni.
Incam yomnqwazi kuDuke Ellington ibalulekile, kuba ngeendlela ezithile Iingoma kwiKhiye yoBomi uninzi lukhumbula ukuba ifom ye-classic yomqambi isebenza njengeBlack, Brown, kunye neBeige (okanye iMax Roach's Inkululeko ngoku Suite okanye uCharles Mingus uPithecanthropus Erectus) kwilinge lakhe lokubonisa ukutshayelwa okupheleleyo kwamava oMnyama waseMelika. Imigca yokuvula icwecwe- Morn ekuseni okanye zihlobo zabahlobo / Nantsi into umvakalisi onobuhlobo / ndineendaba ezimandundu endinokuzidlulisela kuye wonke umntu, ukusuka kuLuthando oluDinga ukuThandwa namhlanje-kubekwe isiteki kubo bonke abaza kulandela.
Umhlaba weLali iGhetto wathetha ngentlungu nesidima sendlala kunye nokungabi namakhaya. Umntu oMnyama wasebenza njengesifundo esingokwembali, ebiza imizekelo yendlela yonke imibala kunye neenkcubeko ezinegalelo ngayo kwinkqubela phambili yelizwe. U-Ngiculela — Es Una Historia — Ndiyacula 'inyuka ngendlela engafanelekanga ngesiZulu, iSpanish, nesiNgesi, ngengoma emanyanisa ngokulula zonke iilwimi. Emva koko kwabakho imibhiyozo elula yothando kunye nokholo-ku-Is not She Lovely, umlingo wokuzalwa kunye nosapho-iimvakalelo ezabelwana ngabo bonke, kodwa zingaze zithathelwe ingqalelo kubomi obuNtsundu obuNtsundu.
eyakhelwe kakuhle ukuphalaza iingoma
Unyaka we-1976, ewe, wawungunyaka we-Bicentennial waseMelika, ngakumbi ngexesha lokuphatheka nokungathembani okujikeleze urhulumente kunye namaziko elizwe, abahlali base-U.S babethwa ngamabali embali yethu namaqhawe. Iingoma kwiKhiye yoBomi isebenza njengolungiso, ingxelo ephikisayo, ecaleni kwezinye iingxelo eziguqukayo, ezinje ngoRichard Pryor I-Bicentennial Nigger kunye neAlex Haley Iingcambu , Zombini ezikhutshwe kwiiveki nje ezimbalwa phambi kwe-albhamu.
Phantse wonke umntu waqonda ubukhulu bokuphumelela kukaWonder, kodwa bekukho izichaso, ubukhulu becala zinento yokwenza nobude kunye nokwanda kwerekhodi. [Andijolisanga okanye kumanyano, ubhale uVince Aletti kuhlolo oluxubeneyo kodwa ubukhulu becala uphononongo olulungileyo Amatye agiqekayo . I-eclecticism ityebile kwaye yamkelekile, kodwa isiphumo sayo sonke siyingozi, kuguqula into ebinokuba ngumthendeleko omangalisayo, umthendeleko wesidlo sangokuhlwa. Kodwa ukukhalaza ngokugqithileyo yayikukuphosa inqaku-nayiphi na i-albhamu enkulu I-albhamu emhlophe , Ukugxothelwa kwisitalato esikhulu ) inokuhlelwa ngokulula ukuba ibe yinto eqinileyo kwaye ihambelane ngakumbi, kodwa umnqweno oquka konke ngumbono opheleleyo, umnqweno wokuqulatha izihlwele kunye nokugubungela umhlaba ongangoko kunokwenzeka ngexesha lomjelo wokuyila ohlaziyiweyo. Ngamanye amaxesha, ngaphezulu kuninzi.
Ngokuqinisekileyo, uluntu luyaqonda. Iingoma kwiKhiye yoBomi ufake iitshathi zealbham kwiNombolo 1, kuphela irekhodi lesithathu lokubetha loo ndawo ngqo ngaphandle kwesango (emva kokukhutshwa kabini kukaElton John). Yahlala apho ke unyaka wonke; ukuqonda nje ukuba ungakanani na umculo we-70s, ungacinga ukuba unkqonkqozile UFrampton Uphila! ngaphandle kwesithuba esingu-1, kwaye sagqitywa ngoJanuwari ka-1977 ngo Ihotele California . Ngokuqinisekileyo, uWonder waphumelela ibhaso lakhe lesithathu elithe ngqo le-Albhamu yoNyaka eGrammys (waphoswa ngumsitho ngenxa yokuba wayetyelele eNigeria ngelo xesha).
Emva Iingoma kwiKhiye yoBomi , nangona, kukho into ebonakala ngathi iyasilela emsebenzini kaStevie Wonder. Kwakungathi, ebudaleni obudala beminyaka engama-26, wayedikwe ngumbono wokubhala nje iingoma ezibethwayo. I-albhamu yakhe elandelayo yayiyeyokumangalisa, yokulinga ngo-1979, ubukhulu becala yayinezixhobo Uhambo oluya kuBomi obufihlakeleyo beZityalo , Ingoma enesandi esiphindwe kabini secwecwe kuxwebhu olubhaliweyo malunga neemvakalelo zokuhlaza kunye neentyatyambo. Ukuguqula ingqalelo yakhe kwi-crusade yeholide yesizwe yokuhlonipha uMartin Luther King, Omnci Ishushu kunaJulayi kwi1980 (ibandakanya uMaster Blaster ophambili (Jammin ’)), kodwa ukusukela ngoko, ubukhulu becala kulindelwe phakathi kweerekhodi ezintsha.
Kwakungathi akukho ndawo ishiyekileyo ukuba siyokulandela Iingoma kwiKhiye yoBomi -Kwaye mhlawumbi kwakungekho. Eli cwecwe lalingengobugcisa nje bodwa; yayisisiphelo sayo yonke into uStevie Wonder ayibonisayo ukusukela ngeentsuku zakhe zomntu oneminyaka eli-11 ubudala. Kwezomculo, kwezopolitiko, ngokwenkcubeko, yayikukufezekiswa kwayo yonke into eyayithenjiswe nguMotown kunye nenguquko yomphefumlo yama-60s. Kwaye kwiinyanga ezimbalwa, idisco yayijolise kumculo omtsha oMnyama, ngelixa kwiipaki nakwiindawo zokudlala zeBronx nangaphaya, ihip-hop yayiqala ukwenzeka kwisizukulwana esilandelayo.
Isandi se Iingoma kwiKhiye yoBomi engazange ayeke ukuphinda-phinda. U-Elton John kunye neNkosana bathi yeyona albhamu bayithandayo. UMichael Jackson noWhitney Houston bacule iindumiso. UCoioio, u-Ol 'ongcolileyo uBastard, kunye noWill Smith bathatha isampulu ngamagwegwe ayo. UMary J. Blige kunye noLuther Vandross bahlanganisa iingoma zabo. U-Kanye West uthe ngo-2005, malunga nokukhutshwa kwe Ubhaliso mva , Andizami ukukhuphisana nento ekhoyo phaya ngoku. Ndizama ngenene ukukhuphisana nayo Ukungaboni kwaye Iingoma kwiKhiye yoBomi . Kuyavakala ukuba uyanyelisa xa uthetha into enjalo, kodwa kutheni ungayibeki njengebhari yakho? Okwangoku, yayisisiganeko sokwenyani xa uStevie Wonder wagqiba ekubeni athathe Iingoma kwiKhiye yoBomi e ukuya kwinqanaba le-38 iminyaka emva kokukhutshwa kwayo, kwaye ubuyise ukuqaqamba umva kulomculo wakhe uphumeleleyo.
Kwakudingeka iimvumi ezininzi eqongeni ukuphinda amalungiselelo e-albhamu, enophondo olupheleleyo kunye namacandelo omtya (loo uhadi!), Kodwa ikwabeka nengqeqesho kwintsebenzo kaWonder, ethi isoloko isenza isiphithiphithi se-medleys kunye nokucula. Imiboniso ibimangalisa, amagama ayinyani njengakuqala, kwaye bekukho uStevie, esasixelela-esibonisa-ukuba umculo lihlabathi ngaphakathi / Ngolwimi esiluqondayo sonke. Phantse kumashumi amane eminyaka kamva, unokuziva ukuba uphelile.
kid cudi icwecwe elitsha 2020
Andrew umlambo weentaka
gaga izalwe ngalendlela
ukubheja amabhaso 2016 inkosana irhafu
eyakhelwe ukuchitheka kukhenketho ngo-2015